အမျိုးသားများအတွက်ရပ်ဂ်ဘီတီရှပ် | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကို T-Shirt ရပ်ဂ်ဘီ
ကြိုဆို » ကို T-Shirt ရပ်ဂ်ဘီ
ဒါဟာအများဆုံးလူတို့သညျအဘို့ကိုရောင်းမယ့်တီရှပ် Sexy ရပ်ဘီင် Cross-Section
ချဉ်းကပ်အားလပ်ရက်များအတွက်လက်ဆောင်စိတ်ကူးလိုအပ်ပါသလား? ဆိုင် sexy ရပ်ဘီ သင်သည်သင်၏ချစ်ရသူမွေ့လျော်ဖို့ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အောက်၌ဖုံးထားဖို့ပြီးပြည့်စုံသောပစ္စုပ္ပန်ကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုရရှိနိုင်, စပျစ်သီးကိုယောက်ျားတစ်ဦးတီရှပ်!
ရှပ်အင်္ကျီစပျစ်သီးကိုရပ်ဂ်ဘီ sexy သစ်ကိုစုဆောငျး
တစ်ဦးက timeless ဂန္ရှပ်အင်္ကျီ
T-ရှပ်အင်္ကျီစပျစ်သီးလူကိုလြှော့ပေါ့ဘယ်တော့မှမယ့်ဂန္တဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏စံဖြတ်ကအားလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများကို fit မှခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါရှပ်အင်္ကျီအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်: S, M, L, XL, XXL, ပင် 3XL 4XL! ရှပ်အင်္ကျီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စတိုးဆိုင်၏ဤမော်ဒယ်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းတကျိပ်နှစ်ပါးသောအရောင်များထက်အားလုံးအတွက်, အဘယ်သူမျှမနည်းပါးလာ။ အဆိုပါအရောင်များဖြစ်ကြသည်: အဖြူအနက်ရောင်, အနီ, ရေတပ်, အစိမ်းအပြာ, ဖိုက်မီးခိုးရောင်, တော်ဝင်ပြာ, Heather မီးခိုးရောင်, အဝါရောင်, khaki အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင် diva ။
ဒီစပျစ်သီးကိုတီရှပ်၏ထည်အလွန်အကြမ်းခံဖြစ်ပါသည်: 185 g / m²။ ဒါဟာလုံးဝကြောင့်စံပြမဆိုရာသီအတွက်ဝတ်ဆင်ရန်ကိုအပူချိန်မြင့်တက်အထူးသဖြင့်လာသောအခါအရာဝါဂွမ်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဂျင်းဘောင်းဘီ, ဘောင်းဘီတို, ဘာမြူဒါဘောင်းဘီတိုသို့မဟုတ်ဂန္ဘောင်းဘီနှင့်အတူမည်သည့်အခါသမယများအတွက်ဝတ်ဆင်နိုင်မယ့်ဂန္တဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအားလပ်ရက်အစာရှောင်ခြင်းချဉ်းကပ်ကြသည်နှင့်သင်နေဆဲချစ်ရသူတစ်ဦးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဆုကြေးဇူးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီမဟုတ်လော တစ်ခုမူရင်းဆုကြေးဇူးကိုလိုအပ်တယ် မွေးနေ့? သို့မဟုတ်သင်မယ့်သင့်ရဲ့ဗီရိုမှထည့်သွင်းဖို့အသစ်တစ်ခုအပိုင်းအစနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ကြဖို့လိုသလဲ ထို့နောက်ဂန္မှပြန်လာ!
လူတို့သညျစပျစ်သီးကိုရှပ်အင်္ကျီတန်ဖိုးထားဖို့များပါတယ်။ နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်: သူတို့ဿုံအဆင်ပြေအမြဲတမ်း up to date ဖြစ်နေပါကခံစားရသည်။ ပြောင်လက်တောက်ပသောအရောင်များကိုပိုနှစ်သက်သူအမျိုးသားများအဘို့အတောက်ပသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူရိုးရှင်းကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်ကြားနေအရောင်များ, သင်တို့သည်နောက်ဘေးဥပဒ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် စိတ်တော်တံ့သောဆုကြေးဇူးကို သင့်ရဲ့ဆိုင်ထဲမှာ sexy ရပ်ဘီ.